News | वार
News | Tag: वार
‘वार’को सफलतामा रमाइरहेका छन् टाइगर
पछिल्लो समय अभिनेता टाइगर श्रफ आफ्नो फिल्म ‘वार’को सफलतामा रमाइरहेका छन् । यो फिल्ममा उनले अर्का अभिनेता ऋतिक रोशनका साथमा स्क्रिन सेयर गरेका छन् । दर्शकहरुले फिल्मलाई रुचाइरहेका छन् । साथै फिल्मले बक्स अफिसमा नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु पनि कायम गरिरहेको छ ।
फिल्म ‘वार’ले बनाएका १० रेकर्डहरु
एजेन्सी । बलिउड सुपरस्टार ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफ अभिनित फिल्म ‘वार’ले बक्स अफिसमा मनग्य आम्दानि गरेको छ । दुई सुपरस्टारहरुलाई एकै फिल्ममा देखिएकोमा फिल्मले दर्शकहरुको राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाइरहेको छ । साथसाथै फिल्मले कैयौं यस्ता थुप्रै रेकर्डहरु बनाएको छ । फिल्मले बनाएका १० रेकर्डहरु यस्ता रहेका छन् ।
ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले ४०० करोड कमायो !
एक्शन अभिनेताद्वय ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म ‘वार’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाई गरिरहेको छ । पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेका ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले कयौं पूराना रेकर्डहरुलाई ब्रेक गरेको छ । अहिलेसम्म यो फिल्मले ४०० करोड भन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको छ ।
‘वार’ हेर्न दर्शकको घुँइचो, हालसम्म कति कमायो ?
एजेन्सी । अक्टोबर २ मा रिलिज भएको बलिउड चलचित्र ‘वार’ शनशनिपूर्ण व्यापार गरेको छ । वार सन् २०१९ मा सबैभन्दा चाँडो २ सय करोड भारतीय रुपैयाँ कमाउने चलचित्र बनेको छ । चलचित्रले ७ दिनमा नै यो आँकडा पार गरेको हो ।
‘वार’को सिक्वेल बन्ने ?
एजेन्सी । अक्टुबर २ अर्थात बुधबारदेखि प्रदर्शनमा आएको ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफ अभिनित फिल्म ‘वार’ले दर्शकको राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ । यसका साथै फिल्मले राम्रो ओपनिङ पनि गरेको छ ।
ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ किन हेर्ने ? यस्ता छन् पाँच कारण
काठमाडौं । दुई अक्टोवर अर्थात आजबाट ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म ‘वार’ दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । सिद्धार्थ अनन्दको निर्देशनमा बनेको यस फिल्मलाई लिएर बक्स अफिसमा विशेष बज बन्दै आएको छ । यो फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएपछि नेगेटिभ भ्यु प्वाइन्ट बनेको थियो, तर फिल्मको नयाँ गीत रिलिजसँगै प्रोमोशन सुरु भएपछि फिल्मको सकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको थियो । यो फिल्ममा वाणी कपुर पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
‘वार’ को ट्रेलर सार्वजनिक, ऋतिक र टाइगरको घम्साघम्सी
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘वार’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ऋतिक रोशन तथा टाइगर श्रफ अभिनित यस फिल्मको ट्रेलर ‘वाइआरएफ’ अर्थात यश राज फिल्म्सको अफिसियल युट्युब च्यानलले मंगलबार ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।
विश्वकै शक्तिशाली हतियार चलाउँदै ‘टाइगर’
एजेन्सी । बलिउडका दुई एक्सन स्टार अभिनित फिल्म ‘वार’ को थुप्रै दर्शकहरु प्रतिक्षामा रहेका छन् । एक्सन र नृत्य दुवैमा अब्बल ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफ लाई एक अर्कामा तुलना गरेर हेरिन्छ ।